Fifangaroana loko sahy amin'ity lohataona ity | Bezzia
Fampifangaroana loko matevina amin'ity lohataona ity
Maria vazquez | 26/04/2021 18:00 | Inona no hotafiko
Betsaka amintsika no mahita loko tsy miandany na mpiray tsikombakomba amin'ny famoronana fitafiana isan'andro. Ireo dia ahafahantsika mamorona fitambarana mora foana amin'ny filalaovana akanjo isan-karazany saika tsy fisainana. Na izany aza, misy ireo izay foana vonona ny hanao risika.
Emili Sindlev, Leonie Hanne, Elena Giada ary Blaire Eadie dia tsy hoe tsy natahotra loko akory fa nahatonga azy ireo ho marika famantarana. Ary ny fijerena ireo kaonty Instagram azon'izy ireo nahazo aingam-panahy hamorona fitambarana mahafatifaty amin'ity lohataona ity.
Toy izany koa no mitranga amin'ny loko toy ny akanjo izay tsy mahazatra antsika, ary indray andro dia nanapa-kevitra ny hividy izahay. Ny fotoana vitsivitsy voalohany dia ho hitantsika fa hafahafa be ny fampiasantsika azy; dia mankany aminy isika. Ny fanabeazana ny maso no tokony hataontsika. Manomboka amin'ny fampidirana ny mifanohitra amin'ny plugins ary mandrosoa avy eo raha tsy tena resy lahatra ianao.
Saingy aleo tonga any amin'ny teboka, amin'ireo fitambarana izay manasa antsika hanao risoriso amin'ny loko amin'ity lohataona ity. Ny iray amin'ireo ankafizinay dia ilay miforona fuchsia sy maitso. Azonao atao ny misafidy ireo loko maitso isan-karazany, na dia tsy afaka manampy aza izahay mampiseho ny fitiavantsika maitso mavo.
Volomboasary sy manga mamorona ny tolo-kevitray faharoa. Fangaro mitambatra tokoa izy io, toa an'i Emili, miloka amin'ny fampifangaroana akanjo amin'ny endrika tena mahery vaika izay mora malemy anefa. Ahoana? Ny fisafidianana akanjo manga amin'ny endrika pastel toa an'i Giada dia efa vita.
Azonao atao koa ny manambatra voasary sy lilac. Lilac dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fanangonana farany ny lohataona-fahavaratra ary hanohy hanao izany. Izy io dia loko izay miasa tsara miaraka amin'ny tonony mafana sy mangatsiaka. Azonao atao ny manambatra azy amin'ny loko mavo sy fuchsia mba hamoronana fitambarana loko sahisahy amin'ity lohataona ity.
Sary - @leoniehanne, @Elenagiada, @alexandrapereira, @marianamachado____, @emilisindlev, @joanavaz_, @blaireadiebee
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » Inona no hotafiko » Fampifangaroana loko matevina amin'ity lohataona ity
Ahoana ny fomba handravahana amin'ny fomba boho taloha
Sakafo ketogenika, izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny sakafo Keto